Ndị ọchụnta ego na China Roman blind blinds and Company | ETEX
Roman Blinds sitere n'ike mmụọ nsọ nke akwa dị nro nke na-agbakwunye mmetụta dị nro na-ekpo ọkụ nke akwa akwa maka ime ụlọ.
● Sistemụ: Sistemụ Njikwa Igwe / Wand
● :zọ: Plain, Jacquard, Flocking, Blackout, Translucent, Sheer, akwa ọkụ
Ese: Sedị ụdị ịkpụ
Device Ngwaọrụ nchekwa maka ndị ìsì ọ bụla
Oge gboo nke roman kpuchie isi gi na windo gi. Ma ị masịrị usoro ọdịnala maka kichin, ma ọ bụ nke ifuru roman blinds maka ime ụlọ, Ezigbo maka ịmachi ìhè anyanwụ mgbe ịchọrọ, blinds roman dị mfe iji na nkecha. Naanị dọpụta eriri iji dozie akwa kpuchie ya ka ọ dị elu ịchọrọ maka windo gị iji mee ka ndị isi roman gị mepụta ihe na-atọ ụtọ na-enweghị oge. Ndị ìsì Rome dị mma maka ọtụtụ nrụnye. Mepụta ihie roman nke nwere ime ihiere, ma ọ bụ meghee anya ime ụlọ gị na windo windo.
Ndị ìsì Rome na-ewu ewu na iji ụlọ mma, ọfịs, ụlọ oriri na nkwari akụ, ụlọ oriri, ụlọ na ọtụtụ ebe ọha na eze. Anyị nwere ike ịmịpụta dị ka usoro zuru ezu maka mkpa ahịa dị iche iche.
Ihe mkpuchi Rome dị mfe ịwụnye, dị mfe ilekọta ya, na-asa ya, ya mere, ọ dị mfe ihicha.
Ihe mkpuchi nke roman na-arụ ọrụ ekwesịghị ịbụ nke doro anya ma dị mfe. Anyị na-enye blinds roman blind nke na-abịa na akwa dịgasị iche iche na eriri na usoro iji kwekọọ na ụdị ịchọrọ. Greatzọ ọzọ maka ịchekwa ndo, ihe mkpuchi anyi nke roman na-egosiputa akwa iji kpuchie ya mgbe ichoro ma nyekwa ya ihe mkpuchi, na-eme ka itugide n’elu akwa ogologo oge mgbe ichoro ozo.
Ndị Roman kpuchiri ya n’ọtụtụ agba gụnyere acha ọcha, isi awọ, ọbara ọbara, pink, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ude, eke na ndị ọzọ. Enwere ike ịmepụta akwa ndị ahịa ọ bụla na igwe mkpuchi anyị na igwe eji achọ mma.
Nke gara aga: Readymade Zebra blind
Osote: Ngwunye ndi Vertical nke Britain